Warar - Maxay Yihiin Qaababyada Isku-habeynta Qaboojiyaha Hawada
Maxay Yihiin Foomamka Isku-hagaajinta Hawo-qaboojiyaha
Marka loo eego xaaladaha hawlgalka, qaboojiyaha hawadu waxaa loo qaybin karaa qawaaniinta gacanta iyo sharciyeynta otomaatiga ah.
1) Habka hagaajinta gacanta waa inuu hagaajiyo xuduudaha hawlgalka ee marawaxadda ama xiraha qalliinka gacanta, sida furitaanka iyo xiritaanka marawaxadda ama beddelidda xagalka baalalaha, xawaaraha iyo xagasha furitaanka albaabka si loo beddelo mugga hawo hawo. Si baahsan ayaa loo isticmaalay waa taageere xagal hagaajin ah (sidoo kale loo yaqaan taageere xagal gacmeed) iyo mashiinka gacanta. Isku hagaajinta gacanta waxay leedahay faa'iidooyinka qalabka fudud iyo qiimaha wax soo saarka oo hooseeya. Laakiin tayada qawaaniintu way liidataa, laguma hagaajin karo waqtiga, taas oo aan ku habboonayn xasiloonida wax soo saarka (dhexdhexaad) tayada. Isla mar ahaantaana, maaha wax ku habboon badbaadinta tamarta dabaysha. Xaaladaha shaqadu aad ayey u liitaan, qalabka wax lagu shubo waxaa shucaaca xirmada tuubada, heerkulku aad buu u sarreeyaa, meesha qalliinku ku yar yahay, waqtiga xiritaankuna aad u dheer yahay.
(2) Qaabka loo hagaajiyo mugga hawada marawaxadu waa in si toos ah loogu beddelo mugga hawada marawaxadda. Inta badan isticmaalku waa taageerayaasha hagaajinta xagasha otomaatigga ah iyo muraayadaha otomaatiga ah. Xuduudaha hawlgalka ee marawaxadda ama xiraha ayaa si shaqsiyan ama isku dhafan loo hagaajin karaa. Macna ma laha nooca hagaajinta, waxay ku xirnaan kartaa nidaamka xakamaynta qalabka otomaatiga ah. Qaabka otomaatiga ah ee otomaatiga ah wuxuu yareyn karaa culeyska shaqada ee dhexdhexaadinta, wuxuu ilaalin karaa xasiloonida hawlgalka, wuxuu hagaajin karaa tayada wax soo saarka, wuxuu hagaajin karaa xaaladaha shaqada wuxuuna yareeyn karaa isticmaalka tamarta.
Qaboojiyaha hawadu waa nooc ka mid ah qalabka isticmaala hawada hawada ah sida qaboojiye dhexdhexaad ah si uu u qaboojiyo ama u ururiyo dheecaanka heerkulka sare ee tuubbada. Waxay leedahay faa'iidooyinka aan lahayn ilo biyo ah, oo ku habboon heerkulka sare iyo xaaladaha hannaanka cadaadiska sarreeya, nolosha muddada dheer iyo qiimaha hawlgalka oo hooseeya. Iyada oo ay yar tahay ilaha biyaha iyo tamarta iyo kor u qaadista wacyiga ilaalinta deegaanka, qaboojiyaha hawada ee keydinta biyaha, keydinta tamarta iyo wasakhda-ka-xorta ah ayaa si ballaaran loo isticmaalay, Nooca iyo dalabka nooca saxanka qaboojiyaha hawada.